Barnoota: 'Itoophiyaan imaammata barnootaa qopheessaa jirtuuf muxannoo argatteetti' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Yeroo ammaa lakkoofsi barattoota biyyittii keessa jiran miiliyoona 25 gaheera
Itoophiyaan imaammata barnootaa haaraa qopheessaa jirtuuf fooramii barnoota addunyaa tibbana Landanitti qophaa'eerraa muuxannoo guddaa argatteetti jedhan Ministir De'etaan Ministeera Barnootaa Itoophiyaa Dr Hasan Yusuuf.
Wagga waggaan Fooramiin barnoota adunyaa ji'a Amajjii keessa Landanitti qophaa'a. Fooramii kana irratti hayyootni beekumsaa fi dandeettii guddaa qaban kan argaman yoo tahu, fuulduree imaammata barnootaa irratti marii fi falmii bu'a qabeessa tahe gaggeessu.
Kan bara kanaas torban darbe keessa magaalaa Landanitti kan qophaa'e yoo tahu, ministirootni barnootaa biyyoota addunyaa 105 tahan irratti argamaniiru.
Mata dureen Fooramii barnootaa bara kanaas ''beekumsa amma qabnuun maal hojjechuu dandeenya?'' kan jedhu dha.
Waltajjii bara kanaa irratti hayyootni akka addunyaatti beekamtii qabaniifi biyyootni gama barnootaan bu'aa guddaa galmeessisan muuxannoo isaanii biyyoota kaaniif qoodaniiru jedhan Ioophiyaa irraa kan hirmaatan Dr Hasan Yuusuuf.
Imaammata barnootaa dhiibbaa guddaa fiduu danda'uu fi milkaa'aa tahe akkamiin qopheessuu fi hojii irra oolchuu dandeenya kan jedhu xiyyeeffannoo guddaa tahuus himaniiru.
Itoophiyaatti daa'imman miliyoona 2 ta'an barnoota dhaabuuf
Yuunivarsitoota dhaabbilee barnoota jedhuuf rakkisan
Itoophiyaan imaammata barnootaa amma jiru erga hojii irra oolchitee oolchite waggootni 15 ol darbaniiru.
Yeroo imaammanni barnootaa kun bahe barattootni biyyittii keessa jiran miiliyoona 10 kan hin caalle tahuu kan himan Dr Hasan, amma lakkoofsi barattotaa miiliyoona 26 gaheera jedhan.
Itoophiyaanis baajata waggaa ramaddu keessaa %25 barnootaaf akka ramaddu himanii, imaammanni kanaan dura qophaa'e bu'aa hedduu fidus hanqinoota baay'ee qabaachuu isaas qorannoodhaan mirkaneessineerra jedhan.
Imaammanni barnootaa Itoophiyaa kanaan dura barsiisota leenjisuu fi daa'imman umuriin isaanii barnootaaf dhaqqabe barachuu qabu kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ture.
Image copyright FACEBOOK/HASAN YUSUF
Goodayyaa suuraa Muuxannoo waljijjiirraa UKtti gaggeeffame
Imaammata barnootaa kana irratti waggoota sadiif qorannoon hayyoota 72 fi ogeessota ragaa funaanan 1000 ol hirmaachise gaggeefamuu Dr Hasan himaniiru.
Akka bu'aa qorannichaattis qulqullinni barnootaa sadarkaa gadii irraa kaasee hanga dhaabbilee barnootaa ol'aanootti hanqina guddaa qabaachuu adda baheera jedhan Dr Hasan.
Dabalataan manneetii barnootaa, barnoota idileen duraa fi sadarkaa lammaffaa babal'isuu irrattis hanqinni jiraachuu adda baheera jedhan.
Wal-geettiin barnootaas baadiyyaa fi magaalaatti hanqina qabaachuu himanii harcaatiin barattootaas naannoo goginsi mudatuu fi horsiisee bulaatti rakkoo tahuu adda baheera jedhan.
Sheeh Mohaammad al-Amuudiin eenyu isaan?
Barsiisaan 'mobaayila barattoota harkaa fudhate' ajjeefame
Fooramii barnootaa Landanitti qophaa'e irratti muuxannoon biyyoota barnootaan bu'aa guddaa galmeessani dhiyaateera.
Qorannoowwan imaammata barnootaa adunyaa gargaaranis dhiyaataniiru jedhan Dr Hasan. Fooramicha irraas imaammata barnootaa haaraa waggoota dheeraaf tajaajilu qopheessaa jirruuf muuxannoo biyyoota garaagaraa argannee deebine jedhan Dr Hasan.
Keessumaa haalli barnootaa biyyoota Afrikaa hedduu wal fakkaataa tahus kan keenya karaa hedduu gadi bu'eera jedhan, Dr Hasan.
Lammiileen Itoophiyaa ala jiraatanis deeggarsa danda'an akka taasisanii fi kallattii garaagaraan akka irratti hirmaataniif imaammata barnootaa haaraa qopheessaa jirru beeksfineerra jedhan.
Ija biyyoota kaaniin kan Itoophiyaa maal fakkata gaaffii jedhus Dr Hasan biyyoota guddatan akka UK fa'a waliin dorgomsiisuu baannus garaagarummaa guddaa argineerra jedhan.
''Asuma kan biyya ollaa keenyaa imaammata barnootaa keenya irraa adda tahe fayyadamtu Keeniyaa irraa barnoota argannee deebine''
Komishiniin daangaa fi eenyummaa maaf barbaachise?
Lukkuuwwan killee farra kaansarii buusan
Biyyoota guddatan waliin dorgomuu baannus akka muuxannootti manneetii barnootaa sadarkaa jalqabaa Landan keessa jiran dawwannee ture jedhan Dr Hasan.
Goodayyaa suuraa ''Bara dhufu irraa eegaluun imaammanni barnootaa haaraan hojii irra oola''
Waan achii arganis BBCtti yommuu himan barnoota idilee qofa ijoollee barsiisu osoo hin taane ispoortii, hawwaasummaa, kalaqa, naamusaa fi haala akkamiin dandeettii isaanii baasuu akka danda'an irratti xiyyeeffachuun barsiisu jedhan.
Itoophiyaanis al takkaatti waan hundumaa jijjiiruu baattus haala imaammata yeroo dheeraa amma bahaa jiruun qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoo kenniti jedhan.
Kanaaf ammoo sirna barnootaa (carriculum) haaraa hojiira oolchuudha jedhanii isaanis irraa jalaan bara dhufu irraa eegalu jedhan.
Fooramii barnootaa kana irratti dhaabbileen idila adunyaa bebbeekamoon barnoota irratti hojjetan gama baajataan nu deeggaruuf waadaa nuuf seenaniiru jedhan.
Haalli jijjirama siyaasaa biyya keessatti uumames isa nuyi waa'ee biyya keenyaa dubbannuun ol qalbii uummata adunyaa hawwateera jedhanii dhaabbileen barnoota irratti hojjetan yeroo kaan gaafatamanii deebii nu dhowwatan illee ofii isaanii haala mijeessuun dursa nuuf kennanii nu waliin mari'atan jedhan.
Bara dhufu irraa eegaluun imaammanni barnootaa haaraan hojii irra akka oolus himaniiru.
Yuunivarsitoota dhaabbilee barnoota olaanoo jedhuuf rakkisan
4 Waxabajjii 2018
Viidiyoo Dubartoonni maaliif barumsaan duubatti hafani?
Traamp maaliif Kantiibaa Landan qeeqan?
Piriimer Liigii Ingiliz keessatti jijjiirran taphattootaa ho'eera